Rush | Performance | Toyota Myanmar – Together Tomorrow Toyota
Rush | Performance
၁.၅-လီတာ နှစ်လုံးတွဲ VVT-i twin-cam အင်ဂျင် (2NR-VE)
အမြန်နှုန်း-၄ မျိုး အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေးသော ဂီယာ
လမ်းအနေအထားအမျိုးမျိုးတွင်သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည် ကို ပေးစွမ်းနိုင် စေရန်အတွက် မောင်းနှင်သည့်အခြေအနေများအပေါ်တုံ့ပြန်ပေးသောလေသွင်းစနစ်နှင့် အိတ်ဇောအဆို့ရှင်စည်းချက်များကို ဆက်တိုက်ကောင်းမွန်နေစေသည့် နှစ်လုံးတွဲ VVT-i (အသိဉာဏ်မြင့်မားသော အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည့် နှစ်လုံးတွဲအဆို့ရှင် စည်းချက်) ကိုပါ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။
အများဆုံးထုတ်လွှတ်ပေးသည့်ပမာဏ (SAE အသားတင်)　kW/rpm ၇၇/၆၀၀၀
အမြင့်မားဆုံးအင်ဂျင်ဆွဲအား (SAE အသားတင်) Nm/rpm ၁၃၆/၄၂၀၀
အမြန်နှုန်း-၄မျိုးအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေး သော ဂီယာ
အမြန်နှုန်း-၄မျိုးအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေးသောဂီယာကို 2NR-VE အင်ဂျင်အတွက် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပါဝါစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဆီစားနှုန်းတို့ကို သာလွန်ကောင်းမွန်စေသည်။
MacPherson ရှေ့ဆိုင်းထိန်းနှင့် အဆက်ငါးခုပါရှိသော အနောက်ဆိုင်းထိန်းတို့ကြောင့် ကိုင်တွယ်မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် စီးနင်းရာတွင် သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းအပြင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတို့ပါ သာလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ကျဉ်းမြောင်းသော ၅.၂-မီတာ အကွေ့အချင်းဝက်ကြောင့် Rush ကို ကျဉ်းမြောင်းသော ပါကင်ထိုးသည့်နေရာများနှင့် လမ်းကြားများတွင်ပင် လွယ်ကူ၊ အေးဆေးစွာမောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လမ်းကြမ်းများ တွင် မောင်းနှင်နိုင် စေရန် ကားအောက်ခြေ ကိုမြှင့်ထားပြီး ထွက်ခွာ ရာ ထောင့် ချိုးအဆင်ပြေအောင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် Rush ကို မြေပြင်အနေအထားမရွေးတွင် မောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၁. ချည်းကပ်ထောင့် – 31.0°
၂. မြေပြင်ပြတ်သားရှင်းလင်းမှု – 220mm
၃. ထွက်ခွာရာထောင့်ချိုး – 26.5°
၄. ရေထဲတွင်မြှုပ်ထားနိုင်သောအမြင့် – 600mm
အရှေ့ထိုင်အင်ဂျင်၊ နောက်ဘီးယက်စနစ်တို့မှ ရရှိသော ပါဝါနှင့်တည်ငြိမ်မှုကြောင့် ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လမ်းအနေအထားအမျိုးမျိုးတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်စေရန်အတွက် မောင်းနှင်သည့်အခြေအနေများအပေါ်တုံ့ပြန်ပေးသော လေသွင်းစနစ်နှင့် အိတ်ဇောအဆို့ရှင် စည်းချက်များကို ဆက်တိုက်ကောင်းမွန်နေစေသည့် နှစ်လုံးတွဲ VVT-i (အသိဉာဏ်မြင့်မားသော အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည့် နှစ်လုံးတွဲအဆို့ရှင် စည်းချက်) ကိုပါ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။
အမြန်နှုန်း-၄ မျိုး အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေးသောဂီယာကို 2NR-VE အင်ဂျင်အတွက် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပါဝါစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဆီစားနှုန်းတို့ကို သာလွန်ကောင်းမွန်စေသည်။
ကျဉ်းမြောင်းသော ၅.၂-မီတာ အကွေ့အချင်းဝက်ကြောင့် Rush ကို ကျဉ်းမြောင်းသော ပါကင်ထိုးသည့်နေရာများနှင့် လမ်းကြားများတွင်ပင် လွယ်ကူ၊ အေးဆေးစွာ မောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လမ်းကြမ်းများတွင်မောင်းနှင်နိုင်စေရန် ကားအောက်ခြေကိုမြှင့်ထားပြီး ထွက်ခွာရာထောင့်ချိုးအဆင်ပြေအောင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် Rush ကို မြေပြင်အနေအထားမရွေးတွင် မောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။